कन्नड अभिनेत्री रचिता रामले ‘सुहागरात’ का बारेमा यस्तो बयान दिएपछि हंगामा मच्चियो – List Khabar
Home / समाचार / कन्नड अभिनेत्री रचिता रामले ‘सुहागरात’ का बारेमा यस्तो बयान दिएपछि हंगामा मच्चियो
कन्नड अभिनेत्री रचिता रामले ‘सुहागरात’ का बारेमा यस्तो बयान दिएपछि हंगामा मच्चियो
admin2weeks ago समाचार Leaveacomment 84 Views
एजेन्सी । कन्नड फिल्म अभिनेत्री रचिता राम आफ्नो एक बयानका कारण यतिबेला विवादमा परेकी छिन् । रचिता छिट्टै चलचित्र ‘लभ यु रचु’ मा देखिदैछिन् । नायिकाले यो चलचित्रको प्रचारप्रसारलाई तिब्र रुपमा गरिरहेकी छिन् । यो फिल्ममा रचिताले बोल्ड सिन दिएकी छिन् ।
हालै फिल्मको प्रमोशनका लागि पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो, जसमा अभिनेत्रीलाई फिल्ममा उनको बोल्ड दृश्यका बारेमा सोधिएको थियो । यसै क्रममा रचिता रामले हनिमुनमा यस्तो बयान दिएपछि कन्नड फिल्म उद्योगमा खैलाबैला मच्चिएको छ । अहिले रचिता राम सबैसँग माफी माग्दै आएकी छन् । यति मात्र होइन, उनलाई प्रतिवन्ध लगाउने पनि चर्चा भएको छ ।
के भनिन् नायिकाले ?
पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले रचिता रामलाई ‘हनिमुनमा के गर्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै अभिनेत्रीले फिल्मको स्क्रिप्टको माग भएकाले ती दृष्यहरू गरेको बताइन् ।
अभिनेत्रीले भनिन्, ‘यहाँ धेरैले विवाह गरेका छन् । मेरो मतलब कसैलाई लज्जित पार्ने होइन। म तिमीलाई सोध्छु बिहे पछि मान्छे के गर्छन श्र ती मानिसहरु आपसमा रोमान्स गर्छन्, हैन, त्यो फिल्ममा देखाइएको छ । मैले यी दृष्यहरू किन गरेँ भन्ने कारण फिल्म हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
कर्नाटक फिल्म चेम्बर अफ कमर्सले कन्नड फिल्म अभिनेत्रीको यो भनाइप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । यति मात्र होइन, रचित रामलाई प्रतिबन्ध लगाउने पनि भनिएको छ । यस चेम्बरका अध्यक्ष तेजस्वी नागलिङ्गास्वामीले रचित रामको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अभिनेत्रीको भनाइले राज्यको संस्कृति र राज्यको छविमा आँच पु¥याएको बताए ।
उनले अहिलेसम्म राज्यका सबै चर्चित तथा दिग्गज अभिनेत्रीले यस्तो विवादास्पद वक्तव्य नदिएको बताए । रचिता राम भर्खरै उद्योगमा प्रवेश गरेकी छिन् र उनलाई फिल्म उद्योगको इतिहास पनि धेरै थाहा छैन । उनले अ भ द्र बोलीले उद्योगको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने प्रयास गरेका छन् ।
यति मात्र होइन, तेजस्वी नागलिङ्गास्वामीले रचित रामासँग माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले आफ्नो भनाइप्रति अभिनेत्रीले माफी नमागेमा आफ्नो फिल्म कर्नाटकमा रिलिज हुन नदिने बताएका छन् । यसबाहेक उनी अभिनेत्रीविरुद्ध अदालत जाने र फिल्म उद्योगमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।
Previous बिहे नगरे पनि आ’नन्द लिरहेकी छु: दिपाश्री निरौला [भिडियो हेर्नुहोस]
Next यो झारलाई चिन्नु हुन्छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार सम्मकाे कमाई, कसरी कमाउने सकिन्छ त !
आफन्तकोमा बस्छिन् भनिएकी हजुरआमालाई घुम्दै जाँदा नातिनिले बृद्धाश्रममा भेटेपछि
भनिन्छ, एउटा तस्बिरले हजार शब्द`भन्दा बढी कथा भन्न सक्छ। यस्तै एक तस्बिर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा …